Kpee ekpere ka ọ kpọọ m ma rịọ m mgbaghara. ? N'ime nkeji 10
Ekpere ka akpo m ma rịọ m mgbaghara abụghị omume ịchọ ọdịmma onwe onye nanị, dị ka ọtụtụ ndị isi na-ahụ.
Kama nke ahụ, ọ bụ nnwere onwe na ọgwụgwọ.
Mgbe ụfọdụ anyị nwere ndị mmadụ na ndụ anyị ndị na-akpasu anyị iwe oge niile mana n'ihi ụfọdụ ihe, dịkwa ka ihe ijuanya dịka ọ nwere ike iyi, anyị enweghị ike ịhapụ ya ka ọ pụọ.
Kaosinadị, onye ahụ ga - eme ka ị nwee ọtụtụ ọnya ahụ na - agwọtabeghị na ọ bụrụhaala na ọ nweghị ọgwụgwọ, anyị ga - ejide ya ebighi ebi n'ihi na ọ ga - abụ ọkwa nke ndụ anyị na - enwebeghị mmeri.
Ọ bụ ya mere ekpere a ji dị mkpa, ọkpụkpọ ebe mgbaghara bụ onye na - egbochi ọnya bụ onye na - agwọ ọnya ngwa ngwa, enweghị mgbagha, anyị ga - adị njikere ịmalite.
Ibido ndụ ọhụrụ n’emezighi emechi dị ka ịnwa iji wuo ụlọ n’elu mkpọmkpọ ebe nke ọzọ na-atachighi ebili n’ihi na n’oge na-adịghị anya, ụlọ ọhụrụ ahụ ga-adaba. E nweghi ezi obi n’eziokwu.
1 Ekpere a na-akpọ m na-arịọ maka mgbaghara mmehie na-arụ ọrụ mgbe niile?
1.1 Ekpere ka akpo m n’ime nkeji iri.
1.2 Ekpere ka ị chọọ m n'ime nkeji iri ma rịọ mgbaghara
1.3 Ekpere nke obi nkoropụ iji kpọọ m
1.4 Ekpere San Antonio ka o wee kpoo m
Ekpere a na-akpọ m na-arịọ maka mgbaghara mmehie na-arụ ọrụ mgbe niile?
Ekpere kwuru n'isiokwu a na-arụ ọrụ mgbe niile. Naanị ị ga-eji okwukwe jiri ekpere.
Anyị ga-egosipụta 4 dị iche iche na ndị nsọ dị iche iche. Nwere ike ikpe ekpere ha niile n’ụbọchị ahụ, yabụ ị ga-enweta ike karịa.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwụsị nhụjuanya gị, ịmalite ikpe ekpere ugbu a. Nanị enyemaka Chineke ga-eme ka m kpọọ gị ọsọ ọsọ.
Efula oge ọzọ, na-ekwupụta ahịrịokwu ndị dị n'okpuru!
Ekpere ka akpo m n’ime nkeji iri.
Nna m ukwu, abụ m onye ntụkwasị obi na-efe Chineke, na-arịọ maka enyemaka, rịọ gị ka ị kpọọ ya oku nwere ike ịdị mkpa, nke nwere ike ịkọwa ọtụtụ ihe.
Achọrọ m oku ahụ na ọ dị mma, na ọ na-eweta ozi ọma San expedito.
Gị, onye nsọ m, na-eduzi onye ahụ ime mkpebi maka ọdịmma m.
Nkeji iri nwere ike ịnwe oge onye ahụ bịakwute anyị, mana cheta na ekpere nwere ike ịme ihe niile.
Maka ọbụna okwu ikpe ndị ọzọ tara akpụ ma a ga-etinyerịrị usoro ndị ọzọ siri ike. Ekpere nke akpọku n’ime nkeji iri ka ọdabara n’ọnọdụ ndị n’egbughị oge, ebe ọdịghị ihe ọ bụla nke mmadụ nwere ike ime na anyị ga-etinye okwukwe anyị niile n’ekpere nke ekwesịrị ịmara, dị ike.
Anyị maara na eziokwu bụ isi mgbe niile na n'amaokwu a, ọ bụ otu ihe. Enwere ike ịme ya n'oge ọ bụla na kwesịrị igosipụta okwukwe na mkpa anyị nwere mgbe anyị na-ekpe ekpere.
Ekpere ka ochoo na nkeji iri na-arịọ m mgbaghara
Oh onye Saint Cyprian m hụrụ n'anya, site n'ịdị mma gị na mmụba gị bara ụba maka ndị na - arịọ gị, m na - arịọ maka ebere, m na - arịọ gị, Eluigwe, kwe ka ịbụ onye m na - efe, chọọ m na mkpụrụ obi na ahụ, n'ihi na achọrọ m nke ya ihunanya, nke ochicho gi na ulo oru gi, San Cipriano, di ike!
Ka aririọ a wee dịrị gị mfe, a chọrọ m ka ị nye m ọrụ ebube ị na-achọ n'ime m agụụ na ịhụnanya gị kachasị mma ...
Ewoo, Onye-nwe, mee ya (kwupụta aha ya) chọọ m mgbe o siri n’elu ihe ndina ya bilie na n ’ọrahụ ụra… n’ihi na ọ bụ ihe m niile!
Na ọ na-atụ uche m, na ọ nweghị ike ime ndụ ya na-enweghị ndụ m ... oh, onye na-elekọta ndị ahụ tara ahụhụ kwesịrị ntụkwasị obi na anyị hụrụ anyị n'anya ma na-akpọku ọzọ ... mee ka mmụọ m na-akpọ isiala, laghachi azụ na mmetụta ya ma na-achọ m, ọ na-ede akwụkwọ maka inwe m nke ya. n'akụkụ ya na ụkwụ ya kpụuru ya n'oche, ebe ọ hụrụ m ...
Ewoo, ọlu ebube nke nkpuru obi ndi n’achiri akwa akwa, nye m ndu, nyem udo ma nye m ihe nile nke na agwa m, na nloghachi nke onye m huru n’anya di ezigbo nso ..
Benemérito San Cipriano, ngọzi gị abịakwute m, ya bụ ọrụ ebube m na-atụ anya ya, Nna m…
Nna di nkpa! Amen
Ekpere a di ezigbo ike, aghaghi ime ya n'oge ezigbo ihe mberede Anyị enweghị ike ịchọ naanị ọdịmma onwe anyị ma jụọ ajụjụ n'echeghị echiche banyere onye nke ọzọ.
Randị nwayọ nke obi na-adaberekarị n’aka onye ọzọ, mana ọ bụrụ na anyị na-ele anya nke ọma n’ime obi anyị, o yikarịrị ka anyị ga-ahụ nwayọ na olileanya iwere oge ụfọdụ ma nwee ike ikpegara onye kachasị elu ekpere.
Ọ bụ ekpere iji kpọọ m ma rịọ maka mgbaghara mmehie enwere ike ịme ogologo oge enwere mkpa izute onye ahụ pụrụ iche.
Ọ nwere ike bụrụ nwatakịrị, onye bụbu onye mmekọ, onye ezinaụlọ ma ọ bụ enyi anyị anyị ahụbeghị ruo ogologo oge na nke nọkwa na mkpa mmekọrịta ahụ kpọmkwem nke enwere ike ịnwe mgbe anyị chere onye ahụ ihu.
Ekpere nke obi nkoropụ iji kpọọ m
Nna Adored, a na m atu egwu iju m ... Biko, a na m ario gi (AHA MAD and) Kpọọ m gwa m otu obi dị gi maka m, kwuputa mmetụta gị niile
Ma otu a enwere m ike inwe obi anụrị na agaghị enye m ego. Nye m ike iji chee ya ihu na-enweghị ihe mgbu, amaara m na n'akụkụ gị, m nwere ike imeri na idi ihe niile na-abịa. Ahapụkwala m Nna m, n'akụkụ gị ka m siri ike
Mgbe anyị na-ebu onye n'uche mgbe niile, anyị enweghị ike izere ịchọ ịmara banyere ya oge niile ebe ọ dị mkpa siri ike ma anyị chọrọ ịkpọtụrụ mana anyị enweghị ike iguzo ruo mgbe anyị laghachiri n'ụlọ, ya mere ịkpọ oku ekwentị ka ọ bụ nhọrọ kacha mma.
Nke a bụ nzube ebumnuche nke a ekpere nke obi nkoropụ. A na-akpọ ya n'ihi na ọ bụlarị akụ ikpeazụ anyị ga-eji rụọ ọrụ ọ bara uru ma nwee ike otu narị pasent.
Na-ekpe ekpere naanị na-enye ike dị mma ma ọ bụrụ na ekpere a anyị ji okwukwe siri ike bulie ya, ihe ga-esite na ya pụta ga-abụ ihe ijuanya.
Anyị nwere ike dị oke ọnụ, nke anyị nwere ike iji wuo ma ọ bụ bibie ya. Ọ bụ ya mere anyị kwesịrị iji jiri obi anyị niile kpee ekpere a, jikwa ụgwọ maka ihe anyị na-eme.
Na-atule mgbe nile na ndị ọzọ ka anyị ka anyị, dị ka okwu Chineke kwuru.
Ekpere San Antonio ka o wee kpoo m
San Antonio Taa ka m bịakwutere gị n'ihi na achọrọ m enyemaka gị ...
Achọrọ m (Aha mmadụ) ịkpọ m, ekpebisiri m ike ịgwa ya otú ọ dị m, ma ọ bụrụ na ọ kpọọ ...
A na m atụ egwu maka na enwere ike ịjụ m mana achọrọ m ịma.Ọ bụ naanị gị nwere ike inyere m aka n'okwu a. San Antonio Achọrọ m ihu oge a n'ihi na achọrọ m ịma ma m ga-emeghachi ma ọ bụrụ na anọghị m, aga m enwe ike ileba anya na mbara ọhụụ ...
Oku a na-akpọ m nke ukwuu. Ọ bụ ya mere m ji chọọ ka ọ mee ngwa ngwa. Enwere m ụjọ ma ama m na m ga-emeri ya. Amen.
Enwere ike inwe ọtụtụ ebumnuche nke ọkpụkpọ a nwere, dịka ọmụmaatụ ọ nwere ike ịbụ nweta mgbaghara dị mkpa iji gaa n’ihu, ịmara etu onye ọzọ si dị, ime ka amata na ọ ka nọ n’oge niile, na nkenke, maka ọtụtụ ihe.
Ihe ịtụnanya bụ na arịrịọ ahụ dị otu a: kpọọ m.
Ọ bụrụ otu a, jụọ ajụjụ, ọ dị mfe. Enweghị ihere ma ọ bụ ịtụ egwu kama ya na ndị dokwuo anya na ezi ebumnuche nke inweta nkwukọrịta ahụ nke anyị chọsiri ike.
Nwere ike ma kpee ekpere niile.
Ha niile dị ike nke ukwuu ma ọ bụrụ na a na-ekpekwa ha ekpere maka otu mmadụ, ha ga-enwe ike dị ukwuu.
Jiri okwukwe kpee ekpere oge niile iji kpọọ m na minit 10 ma nwee obi ụtọ na ịhụnanya!